Utu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
N'ọtụtụ ubi, ọbụna n'etiti ndị kachasi anya amateur agrotechnists, ọ bụ obere ịchọta bushes raspberry bushes. Ndị mmadụ maara na tomato ndị a acha ọbara ọbara, ma ọ bụghị amber. Red raspberries - bụ onye ikwu nke mbụ ọhịa tomato - ọhịa raspberries. Ma n'otu oge, na "domesticated" a na-agbanwe osisi, nke mere ka ọdịdị nke mkpụrụ osisi amber na-emepụta ihe dị ka mkpụrụ osisi.
Ọ bụ mmadụ ole na ole n'ime anyị ahụla raspberries uhie n'anya anyị. Ma e nwere nwa tomato. Nke a bụkwa utu. Ụdị omenala a dị mma dịka ndị nnọchiteanya "omenala". Blackberry strawberries adịghị ama nke ọma, ebe ọ bụ na mgbe e kwuru banyere nwa tomato, ọtụtụ nwere njikọ na blakberị.
Ojiji nke nwa raspberries: bara uru Njirimara na contraindications
N'okpuru ubi na n'oge okpomọkụ na okpomọkụ, ị nwere ike ịchọta osisi bushes na nwa tomato. A na-akpọ utu a blackberry. Ọtụtụ na-ewere ya maka blackberry. N'ezie, oyiyi yiri nnukwu: nnukwu nwa na-acha odo odo tint tomato na spiky Ome. Blackberry rasperberry blackberry, na-ejikọta ọtụtụ uru bara uru nke raspberries uhie na blakberị, karịrị ha mkpụrụ, uto na, karịsịa, uru maka ahụ ike ụmụ mmadụ.
Mkpụrụ osisi a rụpụtara n'ụlọ, nke kachasị mma
Raspberries bụ bred aromatic, nke a na-ejikarị eme jams, jams, "vitamin" (mkpụrụ ọhụrụ ọhụrụ, ala na shuga), na-emepụta ihe, syrups, ma ọ bụ na-ekpo ọkụ. Ikekwe ọ bụghị onye ọ bụla maara na ọ bụghị naanị nzacha ụtọ, ma a pụkwara ịṅụ mmanya site na raspberries. A na-eji tomato na-eme ka mmanya na-esi ísì ụtọ dị mma n'ụlọ, nke ha onwe ha.
Akụkụ 10 dị iche iche nke raspberries ndozi maka mpaghara Moscow
Raspberries - otu n'ime ihe ndị kasị atọ ụtọ na tomato. Otú ọ dị, ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ ụdị ndị dị mma maka ịkụ na mpaghara ụfọdụ. Anyị na-enye gị ụdị kacha mma nke raspberries remontant maka ìgwè dị n'etiti. Atlanta na-anọchite anya osisi okpukpu abụọ, ha kacha elu bụ 1.
Esi esi mee jam jam ke ulo
Nri jam - ihe kachasị amasị ụmụaka na ndị okenye. A na-etinye ha na mmiri, na-eri shuga na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ, gbasaa na nri. A na-akwado ya iji ọgwụgwọ ọkụ na-enweghị ya. Onye ọ bụla maara uru bara uru nke nri a. Anyị chọrọ ịkọrọ gị ụfọdụ nchịkọta ụtọ na dị mfe maka ịme jam.
Ihe a ga-eme na raspberries maka oyi: esi mechie jam, compote, sirop, esi ifriizi na igwu na shuga
Utu bunch ọtụtụ ndị metụtara n'oge nwata. A na-ekwu ya na ọtụtụ akụkọ ndị mmadụ, abụ na egwu, ọ bụkwa site na beri a bụ nke magburu onwe ya maka ịgwọ oyi. N'isiokwu a anyị ga-ele anya na owuwe ihe ubi nke beri a maka oyi na uru bara uru nke raspberries. Njirimara bara uru nke utu fatịlaịza nwere ọgaranya na-eme nri: salicylic na acid ascorbic, mineral, mmepụta ihe na vitamin, tannins, pectins na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.